ကော်နာစောင့်နေတဲ့ ဘောလုံးသမား နှစ်ယောက်
တယောက်ကို တယောက် ဖက်ထားသလိုမျိုး။
ခုတော့ မိတ်ဆွေတွေပဲ ရန်သူ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။
ငှက်နှစ်ကောင် သူတို့ ရတယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 5:05 PM
mg kg said...
အရမ်းအရမ်းကြီးကို ကြိုက်တယ် . .အကို . .အရမ်းကြီးကိုလည်း .. ထိတယ် လေးစားတယ်ဗျာ
ထိ လိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေ
တော်လှန်ရေးကြီးကလည်း အဓွန့် ရှည်လှပေါ့
အချို့ လဲမလိုအပ်ပဲ တခြားဘုံဘ၀ကို ရောက်ကုန်ကြ။
အေးဗျာ ကျနော်တောင် ဓါးမသွေးတာ ကြာပီဗျာ။
Very very like that poem......
လင့်ထားလိုက်ပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျန်းမာရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
နိမိတ်ပုံတွေ ကထိလိုက်တာ.။ ပြောလိုက်မှာဘယ် အက်စစ် အပြင်းစားကို ရွေးသောက်ရမလဲ စဉ်းစားသွားတယ်...
it really touch my heart. I agree with you. It's totally right. They don't need to find chances by themselves. We just give chances to them.
ခုတော့ မိတ်ဆွေတွေပဲ ရန်သူ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။))))
ကဗျာသိပ်နားမလည်ပေမဲ့ ဒါကို ကိုးကားထားတာ ကြိုက်တယ်။
မလုပ်ပါနဲ့ ကဗျာမရေးနိုင်ပဲနေဦးမယ် :D
မလုပ်နဲ့ မလုပ်ပါနဲ့။ ။
ညီညွှတ်ရေးသို့ အလင်းပေးခဲ့ ပါ၊ ကို ကောင်းကင် ။ ။
This poem is really great and I do respect you even though I ain't that good at reading poems. Examples are really touching and showing how our country men are behaving each other for the country. Thank You.